लण्डनमा नाचे राजेश हमाल – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
११ कार्तिक २०७७, मंगलवार ०९:३२ English
लण्डनमा नाचे राजेश हमाल
धर्मराज अधिकारी, लण्डन, १ बैशाख । पांच दशकको उमेरमा पनि विवाहको खासै चटारो नभएका नेपाली फिल्मका महानायक राजेश हमाल हास्यकलाकार दिपाश्री निरौलासंग कम्मर मर्काइ मर्काइ नाचेका छन । चलचित्रको पर्दामा बाहेक स्टेज कार्यक्रमहरुमा विरलै भेटिने नायक हमाल सम्सारा युकेले बुधबार लण्डनमा आयोजना गरेको सम्सारा शुभकामना सांझ २०६९ मा यसरी नाचेका हुन । बांझो खेतमा छड्के सलाम छ मायांलाई पहिलो भेटमा भन्दै बेलायतवासी नेपाली दर्शकसामु उनीहरु छमछमी नाचे ।
बेलायतका लागि नेपाली राजदुत डा. शुरेसचन्द्र चालीसेले कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रिय स्तरका कलकारहरुलाई लण्डनमा सम्मान गर्न पाउंदा आफुलाई खुशी लागेको बताए । सम्सारा युकेले बेलायतका नेपालीहरुलाई बैंकिङ प्रणाली मार्फत नेपालमा पैसा पठाउने र पाउने सहज वातावरण बनाएकोप्रति आफु आभारी रहेको राजदुत चालीसेले बताए । नेपालको अर्थतन्त्रमा सम्सारा युकेले पु¥याएको योगदान उनले प्रशंसनीय रहेको समेत स्मरण गरे ।
१ बैशाख २०६९, शुक्रबार २१:१८ मा प्रकाशित